ပေ့ါဘာကတော့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ဒေါသကို သွားပြန်စလိုက်ပါပြီ
ခြေစွမ်းပြကစားဖို့ဆိုရင် စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ပေ့ါဘာ Pogba
14 Aug 2018 . 10:51 AM
မန်ယူကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာ Pogba ဟာ နည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မယ့် စကားဆိုလိုက်ပြန်ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ အသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြကစားဖို့ဆိုရင် စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တဲ့အပြင် သူ့စိတ်ခံစားချက်အတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်ရင် ဒဏ်ရိုက်ခံရမှာလည်း စိုးရိမ်တယ်ဆိုပြီး ပြောခဲ့တာပါ။ ပေ့ါဘာနဲ့ မော်ရင်ဟိုတို့ကြားက ဆက်ဆံရေးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း ပရိသတ်တွေ အသိပါပဲ။ ဒီနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့အတွင်း ပေ့ါဘာဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ပြောင်းမယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအဖွင့်ပွဲမှာ မော်ရင်ဟိုက ပေ့ါဘာကို အသင်းခေါင်းဆောင် ရာထူးပေးခဲ့တာကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးကြား ပြန်အဆင်ပြေနေလောက်ပြီလို့ ထင်နေတုန်းမှာပဲ ပေ့ါဘာက ထဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ့ဘာက “တကယ်လို့ ခင်ဗျား(မီဒီယာများကိုဆိုလို) စိတ်မပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင် အသင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ကစားနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစကားတွေက ကျွန်တော် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ မရပါဘူး မဟုတ်ရင် ဒဏ်ငွေအချခံရမှာပါ”လို့ ဆိုခဲ့တယ်။ မီဒီယာတွေက ပြင်သစ်နဲ့ မန်ယူအသင်းမှာ ကစားရတာ ဘာတွေ ကွာခြားလဲလို့ မေးမြန်းခဲ့တော့ ပေ့ါဘာက”ကျွန်တော့်ခြေစွမ်းက အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အသင်းပဲ မတူတာပါ။ ဘောလုံးကစားရတာ ကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့် ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးသလိုပဲ ကိုယ့်အတွက် Comfort ဒါမှမဟုတ် ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့နေရာမှာ ကစားရမယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေတာပေ့ါ”လို့ ပြောကြားခဲ့တယ်။ ပေါ့ဘာရဲ့ စကားကြောင့် မီးသေနေတဲ့ မော်ရင်ဟိုရဲ့ ဒေါသကို ပြန်ဆွပေးသလိုဖြစ်သွားမလားဆိုတာကိုတော့ . . .
ခွစှေမျးပွကစားဖို့ဆိုရငျ စိတျပြျောရှငျဖို့ လိုအပျတယျလို့ ဆိုလိုကျတဲ့ ပေ့ါဘာ Pogba
မနျယူကှငျးလယျလူ ပေါ့ဘာ Pogba ဟာ နညျးပွမျောရငျဟို Mourinho စိတျဆိုးဒေါသထှကျမယျ့ စကားဆိုလိုကျပွနျပါပွီ။ အဲဒါကတော့ အသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွကစားဖို့ဆိုရငျ စိတျပြျောရှငျဖို့ လိုအပျတယျလို့ ဆိုခဲ့တဲ့အပွငျ သူ့စိတျခံစားခကျြအတိုငျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောလိုကျရငျ ဒဏျရိုကျခံရမှာလညျး စိုးရိမျတယျဆိုပွီး ပွောခဲ့တာပါ။ ပေ့ါဘာနဲ့ မျောရငျဟိုတို့ကွားက ဆကျဆံရေးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက အဆငျမပွဖွေဈခဲ့တာကိုလညျး ပရိသတျတှေ အသိပါပဲ။ ဒီနှရောသီအပွောငျးအရှအေ့တှငျး ပေ့ါဘာဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးကို ပွောငျးမယျလို့ သတငျးတှထှေကျခဲ့ပမေယျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီအဖှငျ့ပှဲမှာ မျောရငျဟိုက ပေ့ါဘာကို အသငျးခေါငျးဆောငျ ရာထူးပေးခဲ့တာကွောငျ့ သူတို့နှဈဦးကွား ပွနျအဆငျပွနေလေောကျပွီလို့ ထငျနတေုနျးမှာပဲ ပေ့ါဘာက ထဖောကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပေါ့ဘာက “တကယျလို့ ခငျဗြား(မီဒီယာမြားကိုဆိုလို) စိတျမပြျောရှငျဘူးဆိုရငျ အသငျးအတှကျ အကောငျးဆုံး ကစားနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ဒီစကားတှကေ ကြှနျတျော ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောလို့ မရပါဘူး မဟုတျရငျ ဒဏျငှအေခခြံရမှာပါ”လို့ ဆိုခဲ့တယျ။ မီဒီယာတှကေ ပွငျသဈနဲ့ မနျယူအသငျးမှာ ကစားရတာ ဘာတှေ ကှာခွားလဲလို့ မေးမွနျးခဲ့တော့ ပေ့ါဘာက”ကြှနျတေျာ့ခွစှေမျးက အတူတူပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ အသငျးပဲ မတူတာပါ။ ဘောလုံးကစားရတာ ကွိုကျနှဈသကျပမေယျ့ ကြှနျတျောပွောခဲ့ဖူးသလိုပဲ ကိုယျ့အတှကျ Comfort ဒါမှမဟုတျ ယုံကွညျခကျြရှိတဲ့နရောမှာ ကစားရမယျဆိုရငျ ပိုပွီးအဆငျပွတောပေ့ါ”လို့ ပွောကွားခဲ့တယျ။ ပေါ့ဘာရဲ့ စကားကွောငျ့ မီးသနေတေဲ့ မျောရငျဟိုရဲ့ ဒေါသကို ပွနျဆှပေးသလိုဖွဈသှားမလားဆိုတာကိုတော့ . . .